Hawaii vaenzi vanosvika uye kushandisa mari kwaive kwakadzikira munaGunyana
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hawaii Kupwanya Nhau » Hawaii vaenzi vanosvika uye kushandisa mari kwaive kwakadzikira munaGunyana
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kumhanyisa Mota • Kurwisa • Culinary • Entertainment • Hawaii Kupwanya Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • vanhu • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • Shopping • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Hawaii vaenzi vanosvika uye kushandisa mari kwaive kwakadzikira munaGunyana.
Kushandiswa kwevashanyi muHawaii munaGunyana 2021 kwakadzikira 15.4 muzana kubva pre-denda raGunyana 2019 uye vaenzi vanosvika vakaramba vari pazasi Gunyana 2019.
Yese yekushandisa nevashanyi vekunze vakauya kuHawaii munaGunyana 2021 yaive $1.05 bhiriyoni.
Pamberi pepasi rose COVID-19 denda uye Hawaii yekugadzika zvinodiwa, Hawaii yakawana rekodhi-nhanho mashandisirwo evashanyi uye vanosvika muna 2019 uye mumwedzi miviri yekutanga ya2020.
Huwandu hwevashanyi 505,861 vakasvika nendege kuHawaiian Islands munaGunyana 2021, kunyanya kubva kuUS West neUS East.
Zvinoenderana nenhamba dzekutanga dzevashanyi dzakaburitswa neDhipatimendi reBhizinesi, Economic Development uye Tourism (DBEDT), mari yakazara nevashanyi vakauya Hawaii munaGunyana 2021 yaive $1.05 bhiriyoni.
Isati yasvika yepasi rose COVID-19 denda uye HawaiiZvinodiwa kuti vafambi vagare vari voga, Nyika yeHawaii yakawana mashandisiro akaitwa nevaenzi muna 2019 uye mumwedzi miviri yekutanga ya2020. Kuenzanisa kwaSeptember 2020 nhamba dzemashandisiro evashanyi dzakanga dzisipo sezvo Departure Survey haina kukwanisa kuitwa munaGunyana wapfuura. kune COVID-19 zvirambidzo. Gunyana 2021 kushandiswa kwevashanyi kwaive kwakaderera pane iyo $ 1.25 bhiriyoni (-15.4%) yakashumwa munaGunyana 2019.
Huwandu hwevashanyi 505,861 vakasvika neair service kune Hawaiian Islands munaGunyana 2021, kunyanya kubva kuUS West uye US East. Mukuenzanisa, vashanyi 18,409 chete (+ 2,647.8%) vakasvika nemhepo munaGunyana 2020 uye vashanyi 736,155 (-31.3%) vakasvika nemhepo uye nezvikepe zvekufamba munaGunyana 2019.
MunaGunyana 2021, vafambi vanosvika kubva kunze-kwenyika vaigona kupfuura zvakatemerwa neHurumende kwemazuva gumi kuzvivharisa kana vakabaiwa zvizere muUnited States kana vaine mhedzisiro yeCCIDID-10 NAAT bvunzo kubva kuTrusted Testing Partner isati yasvika. kuenda kwavo kuburikidza nechirongwa cheSafe Travels. Musi waNyamavhuvhu 19, 23, Hawaii Gavhuna David Ige akakurudzira vafambi kuti vadzikise kufamba kusingakoshi kusvika pakupera kwaGumiguru 2021 nekuda kwekuwedzera kwenyaya dzeDelta dzakasiyana izvo zvaremedza nzvimbo dzehutano nehurumende. The Nzvimbo dzeUS dzekuDzivirira Dziviriro uye Kudzivirira (CDC) yakaramba ichitemesa zvirambidzo pazvikepe zvekufamba kuburikidza ne "Conditional Sail Order", nzira yakaganhurwa yekutangisazve rwendo rwevatyairi kudzikamisa njodzi yekuparadzira COVID-19 muchikepe.
Avhareji yekuverenga vanhu zuva nezuva yaive vashanyi zana nemakumi mashanu neshanu munaGunyana 154,355, zvichienzaniswa ne2021 munaGunyana 20,472, zvichienzaniswa ne2020 munaGunyana 206,169.